समाचार – Page 61 – My Blog
No Comments on अनुहार नै नहेरी बुवाआमाले बिवाह गरेर पठाईदिएको श्रीमानको घर पुग्दा अन्य २ श्रीमती नै पाएपछि (भिडियो सहित)
No Comments on बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए
No Comments on काठमाडौंको रोडमा १७ दिनदेखि सित्तैमा सयौंलाई खाने खुवाउने को हुन् ? शिशिर भण्डारी पुगेर एक दिन खुवाउन सहयोग गरे (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौंको बालाजुको गँगा हलको आँगनमा दैनिक साँझ ५:३० पछि मजदुरी गर्नेहरु, घरमा चुलो नबलेकाहरु र बिभिन्न कारणले भोको रहेका सयौं भेला हुन्छन् । गएको १९ दिनदेखि केहि युवा साथीहरु मिलेर दिनमा ४०० देखि ५०० भोकाहरुको पेट भरिरहेका छन् । ‘नेपाल युट्युब पत्रकार संघ’का साथीहरुको यो सम्मानजनक काममा धेरैले साथ र सहयोग गरिरहेका छन् । यो सँकटको समयमा धेरै भोकै रहेको देखेपछि सँघले यो कदम चालेको हो । गँगा हालको आँगनमा दैनिक सयौं जना भोक मेटेर जान्छन् भने त्यसपछि युट्युब पत्रकार सँघका साथीहरु गाडीमा खानाको प्याकेट लिएर काठमाडौं चाहर्छन् ।
कोभिड १९ ले देशभर सङ्कट उत्पन्न गराए सँगै मजदुर वर्ग , बालबालिका तथा काम गरी खाने मानिसहरूलाई यति बेला निकै समस्या भएकाले सङ्घले एक छाक भए पनि सडकमा खाना बाँड्न थालेको हो। करिब दैनिक २०० को हाराहारीमा मानिसहरू त्यहाँ खानाको निम्ति आउने गरेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउन सुरु गर्दै पत्रकार धमलाले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको र राज्यका हरेक नागरिकको समस्या मा सबैलाई साथ दिन सबैलाई अपिल समेत गरेका छन्। यसैबिच सँघको यो काममा हातेमालो गर्न शिशिर भण्डारी पुगे र एकदिनको खाना खुवाउन लाग्ने रकम बराबर १० हजार सहयोग गरेर आए । भिडियो हेर्नुस
५६ वर्षीय बेलायती प्रधानमन्त्रीले ३३ वर्षीया प्रेमिकासँग गरे सुटुक्क विवाह
No Comments on ५६ वर्षीय बेलायती प्रधानमन्त्रीले ३३ वर्षीया प्रेमिकासँग गरे सुटुक्क विवाह
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जनसनले आफू भन्दा तेइस वर्ष कम उमेरकी क्यारी साइमन्डससँग वेस्टमिनिस्टर कयाथड्रलमा गुपचुप आयोजना गरिएको समारोहमा बिहे गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जनसनका निकटतम मित्र र परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा यो बिहे भएको त्यहाँका केही अखबारहरूले जनाएका छन्े । प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले यसबारे टिप्पणी गर्न इन्कार गरेको छ ।
काम तथा निवृतिभरण मन्त्री टेरेसे कफीको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री जनसन र क्यारी साइमन्ड्सलाई उनीहरूको बिहेको शुभकामना दिइएको छ । आइतबारको द मेलले बिहेमा ३० जना अतिथिहरूलाई तत्कालको जानकारी दिइ बोलाइएको थियो । कोभिड–१९को रोक आदेश अनुसार धेरै ठूलो संख्याको सहभागितामा बन्देज लगाइएको छ ।
३३ वर्षीया साइमन्डस ५६ वर्षीया जनसनलाई रोमान्टिक सम्बन्धमा बाँधिएको पहिलो पटक सन् २९१९को सुरुमा मिडियामा खबर आएको थियो । बिहेमा साइमन्डस सेतो पोशाकमा आएको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
भागी विवाह गरेकाे २० दिनपछि युवती छाडेर युवक फरार, गोठमा बन्धक बनिन् युवती !
No Comments on भागी विवाह गरेकाे २० दिनपछि युवती छाडेर युवक फरार, गोठमा बन्धक बनिन् युवती !
सर्लाही । यहाँको विष्णु गाउँपालिकामा एक युवती घरेलु हिंसाको सिकार भएकी छन् । विष्णु–७ दुलबाका स्थानीयवासी शिवा राय यादवसँग भागी विवाह गरेकी युवती हिंसाको सिकार भएकी हुन् । गत वैशाख ५ गते सर्लाहीबाट भागी बारामा बसेका युवक र युवती २० दिनपछि गाउँ फर्किए पनि युवकले आफ्नो घर जान नमानेपछि ती युवती हिंसाको सिकार भएकी हुन् ।
युवक र युवती दुवै जनाको सल्लाहअनुसार युवकले विवाह गर्ने भनी घरबाट लिएर भागेका थिए । तर २० दिनपछि गाउँ फर्किएर आफूलाई ‘तिमी मुसहर समुदायकी केटी हौ, तिमी आफ्नोघर जाऊ, म तिमीसँग विवाह गर्दिनँ’ भनी छाडिदिएको पीडित युवतीले बताइन् ।
शिवाले ‘तिमी मुसहर समुदायकी हौ, तिमी यहीँ’ बस भनेर दाउरा राख्ने गोठघरमा छाडेर भागेको पीडित युवतीले बताइन् । शिवा भागेपछि शिवाका परिवारले अहिले पीडित युवतीलाई गोठमै राखेर यातना दिइरहेको सर्लाहीका दलित अगुवा महेश पासवानले बताउनुभयो ।
“जातीय छुवाछूत समाजिक अपराध हो, प्रेम सम्बन्धले जातपात देख्दैन तर यस्तो किसिमको जातीय विभेद हुनु भनेको दण्डनीय अपराध हो”, अर्का दलित अगुवा राजेश पासवानले भन्नुभयो । भागेर २० दिनसँगै बस्न मिल्ने तर आफ्नो घरमा राख्न नमिल्ने भन्दै पासवानले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली समाजमा दलितका छोरीको जवानी चल्ने तर दलितले छोएको नचल्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको पासवानको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय सरकार तथा प्रहरी प्रशासनसँग दोषीलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडा कारवाहीको मागसमेत गर्नुभएको छ ।
यता युवतीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए प्रचलित कानूनअनुसार युवकलाई कारवाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले बताउनुभयो । प्रदेश नं २ का अधिकांश जिल्लामा जातीय तथा धार्मिक र वर्गीय परम्पराको अन्त्य नहुँदा यस्ता घटना निरन्तर घटिरहेको मानवअधिकारवादी मुकेश मिश्रले बताउनुभयो ।
बाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउन नागमती बाँध बन्ने, नदी सफाइका लागि साढे ३ अर्ब
No Comments on बाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउन नागमती बाँध बन्ने, नदी सफाइका लागि साढे ३ अर्ब
काठमाडाैँ । वाग्मतीको उद्गमस्थलको जलाधार संरक्षण तथा जलप्रवाहमा सुधार गर्न सुन्दरीजलमा नागमती बाँध निर्माण गरिने भएको छ । यसअघि हिउँदमा पनि वाग्मती जलप्रवाह बढाएर नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको धाप भन्ने स्थलमा बाँध निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागमती बाँध पनि तयार भएपछि नदीमा स्वच्छ पानी बगाउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।
No Comments on बिहेमा सालीले बेहुलाको जुत्ता लुकाउदा पैसा नदिने बेहुला पक्षलाई यसरी थ र्काएको भिडियो बन्यो रातारात भाईरल , हेर्नुहोस बिहेमै पर्यो यस्तो ल फ डा (भिडियो)